Iindaba - Okwangoku, ibhetri yamandla e-lithium kunye nokugcinwa kwamandla kwebhetri ye-lithium zixabiseke kakhulu kumzi mveliso.
I-OEM kunye ne-ODM kunye ne-OBM
Ngesanti kubunzulu baphantsi yesekethe Breaker
MCB kunye nePadlock
Circuit Breaker Auxiliary Izixhobo
Uluhlu lweesekethe eziBlue
Uluhlu lweSekethe yoLwaphulo
Uluhlu lweSekethe yoLuhlaza
Izahlulo Breake Circuit
Inaliti Ukubumbela Machine
UMkhuseli okrelekrele weMicrocomputer
Iswitshi smart kunye nesokethi
Tshintshela kunye ne Socket
Ulawulo noKhuselo lokuTshintsha
Isiphazamiso seSekethe esingaphantsi (GFCI)
Izixhobo zokuFakela umbane
Uqhakamshelwano kunye nokudluliswa kunye nokuQalwa
Tshintshela isixhobo esingasasebenziyo
Isiseko sePlastiki sePlastiki
HV Ukukhetha ukutshintsha
I-Voltage ephezulu yangaphakathi
Umbane ophezulu wangaphandle
Isibali xesha kunye neMeter
Ukutshintsha kweManzi kunye neSocket
utshintsho manzi & socket
Utshintsho lwemozulu ekhuselweyo
Isixhobo soKhuseleko lweSurge (SPD)
SF6 weSekethe Breaker
Ikhabinethi yeNet epoxy
Ibhokisi yokudibanisa yePV
Ubungqina boMbane boMbane
Umlawuli woNikezelo lwaMandla
Ingcinezelo uqinisa Ke Ukumiswa uqinisa
Ukubhoboza isinxibelelanisi uqinisa
Uthotho oluDibeneyo lokuDibanisa
Izixhobo ze Vacumm
Isixhobo Sofakelo Nezixhobo
ubushushu kunye nolawulo lobushushu
Ifilimu yeMetallzed yeCapacitor
Okwangoku, ibhetri ye-lithium yamandla kunye nokugcinwa kwamandla kwebhetri ye-lithium zixabiswa kakhulu kumzi mveliso.
Okwangoku, ukusetyenziswa kobuchwephesha bebhetri ye-lithium kugcino lwamandla ikakhulu kugxile kumabala esiseko sesikhululo samandla ombane, inkqubo yokugcina ekhaya ebonakalayo, izithuthi zombane kunye nezikhululo zokutshaja, izixhobo zombane, izixhobo zeofisi yasekhaya kunye nezinye iinkalo. Ngexesha le-13 leminyaka yesiCwangciso seMinyaka emihlanu, imakethi yokugcina amandla e-China izakukhokela kwicandelo lezixhobo zikarhulumente, ngokungena ukusuka kuphehlo lombane kunye necala lokudlulisela kwicala lomsebenzisi. Ngokwedatha, umthamo wesicelo semakethi yokugcina ibhetri ye-lithium kwi-2017 yayimalunga ne-5.8gwh, kwaye isabelo sentengiso se-lithium-ion ibhetri iya kuqhubeka nokukhula ngokuthe ngcembe unyaka nonyaka ngo-2018.
Ngokwimeko yesicelo, iibhetri ze-lithium-ion zinokwahlulwa zibe kukusetyenziswa, amandla kunye nokugcinwa kwamandla. Okwangoku, ibhetri ye-lithium yamandla kunye nokugcinwa kwamandla kwebhetri ye-lithium zixabiswa kakhulu kumzi mveliso. Ngokwengqikelelo yeengcali ezinegunya, inani lamandla ebhetri ye-lithium kuzo zonke izicelo zebhetri ye-lithium e-China kulindeleke ukuba inyuke iye kwi-70% ngo-2020, kwaye ibhetri yamandla iya kuba yeyona nto iphambili kwibhetri ye-lithium. Ibhetri ye-lithium yamandla iya kuba yeyona nto iphambili kwibhetri ye-lithium
Uphuhliso olukhawulezayo lweshishini lebhetri ye-lithium ikakhulu lubangelwa ngumgaqo-nkqubo okhuthaza uphuhliso loshishino lwezithuthi ezitsha zamandla. Nge-Epreli ka-2017, iSebe lezemizi-mveliso kunye neetekhnoloji yolwazi kwiRiphabhlikhi yabantu base China nayo ikhankanyile "kwisicwangciso esiphakathi kunye neside sophuhliso lwexesha elizayo kwishishini leemoto" ukuba imveliso kunye nokuthengiswa kwezithuthi zamandla amatsha kufanele kufinyelele kwizigidi ezi-2 ngo-2020, kwaye ukuba izithuthi zamandla amatsha kufuneka zenze iakhawunti ngaphezulu kwe-20% yemveliso kunye nokuthengisa ngo-2025. Kuyabonakala ukuba amandla amatsha kunye nokonga umbane oluhlaza kunye namanye amashishini okhusela indalo aya kuba ziintsika ezibalulekileyo zoluntu kwixesha elizayo.
Kwindlela yexesha elizayo yetekhnoloji yamandla ebhetri, i-ternary iba yinto ephambili. Xa kuthelekiswa ne-lithium cobalt oxide, i-lithium iron phosphate kunye ne-lithium manganese dioxide batri, i-ternary lithium battery ineempawu zobuninzi bamandla, iqonga lamandla ombane, uxinzelelo oluphezulu lwempompo, ukusebenza kakuhle komjikelo, uzinzo lwe-electrochemical njalo njalo. Inezibonelelo ezibonakalayo ekuphuculeni uluhlu lwezithuthi zamandla amatsha. Kwangelo xesha, ikwanazo nezibonelelo zamandla okuphuma aphezulu, ukusebenza kakuhle kobushushu obuphantsi, kwaye unokuziqhelanisa nobushushu bemozulu yonke. Kwizithuthi zombane, ngaphandle kwamathandabuzo uninzi lwabathengi luxhalabile malunga nonyamezelo kunye nokhuseleko, kwaye ibhetri ye-lithium-ion ngokucacileyo lukhetho olungcono.
Ngokunyuka okukhawulezileyo kwemfuno yezithuthi zombane, imfuno yamandla ebhetri ye-lithium-ion inyuke ngokubonakalayo, eyeyona nto iphambili ekuqhubeni ukukhula kweshishini lebhetri ye-lithium-ion. Ibhetri yeLithium yimveliso enzima kakhulu. Yazalwa ngeminyaka yoo-1980 kwaye yafumana ixesha elide lemvula kunye nezinto ezintsha zetekhnoloji. Kwangelo xesha, nokuba imveliso okanye ukutshatyalaliswa kwenkqubo yebhetri ye-lithium ayinabungozi kangako kwindalo esingqongileyo, ehambelana ngakumbi neemfuno zophuhliso lwangoku kwezentlalo. Ke ngoko, ibhetri ye-lithium iyeyona nto iphambili kugqaliso lwamandla amatsha. Kwixesha eliphakathi, ukuphuculwa kwetekhnoloji yothutho yangoku sisiseko sokuphucula ubuchwephesha besicelo sehlabathi. Njengemveliso exhasayo ebalulekileyo yokuphuculwa kwetekhnoloji yothutho, ibhetri yamandla e-lithium kulindeleke ukuba ibe nophuhliso olukhulu kwiminyaka emi-3-5 ezayo.
Ixesha Post: Sep-28-2020
© Copyright - 2020-2020: Inkxaso yobugcisa: